यी ५ क्रिकेटर जसलाई विश्वभर मन नपराउने कोहि छैन ! – E-Suchana Hub
विश्वभर क्रिकेटको आफ्नै क्रेज छ । यो खेल सीमित संख्यामा मात्रै देशमा खेलिने भएतापनि यसलाई मन पराउने फ्यानहरु विश्वभर रहेका छन् । यो खेल खेल्ने केही यस्ता खेलाडीहरू छन, जसले आफ्नो खेल र उत्कृष्ट खेलकुद भावनाका कारण उनीहरूलाई मन पराउने मानिसहरूलाई संसारभर भेट्टीन्छन। यी खेलाडीहरु यस्ता छन् जसलाई घृणा गर्न निकै गाह्रो छ र यही कारणले गर्दा उनीहरुलाई विश्वभरका क्रिकेट फ्यानहरुले पनि मन पराउँछन् ।
विश्वभर मन नपर्ने क्रिकेटर पनि छन् । खेलाडीहरूले आफ्नो मैदानमा हुने व्यवहार र खेलका कारण जनताको समर्थन पाउँछन्। यस्ता खेलाडीहरू सबैको रोजाइ बन्छन् र जहाँ गए पनि दर्शकले उनीहरूलाई पूर्ण समर्थन गर्छन्। यस लेखमा, हामी यस्ता ५ खेलाडीहरू उल्लेख गर्दैछौं, जसलाई सबैले मन पराउछन् ।
२०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने पूर्व भारतीय फास्ट बलर आशिष नेहरालाई एक टीम म्यान भनिन्छ र उनको मजाकिया स्वभावलाई साथी खेलाडीहरू र दर्शकहरूले मनपराएका छन्। जब नेहरा गौरव चोपडाको शोमा आए, उनी आफ्नो एकदमै सुन्दर अवतारमा देखिए र धेरै हास्यास्पद किस्साहरू पनि साझा गरे। पछिल्ला केही वर्षहरूमा, नेहराको फ्यान बेस धेरै बढेको छ र उनि जस्तो खेलाडी छन् सायद मन नपराउने कोहि छैन।
अष्ट्रेलियाका पूर्व विकेटकिपर ब्याट्सम्यान एडम गिलक्रिस्ट मैदानमा आक्रामक ब्याटिङ शैलीका लागि परिचित हुन छन् तर मैदान बाहिर उनी निकै शान्त र आदर्श व्यक्ति हुन् । गिलक्रिस्टले आफ्नो ब्याटिङ र विकेटकिपिङबाट विश्वभर आफ्ना फ्यान कमाए । गिलक्रिस्टले मैदानभित्रै पटकपटक खेलकुद प्रदर्शन गरे र अम्पायरले आउट गर्ने निर्णय नदिएपछि उनी एकपल्ट आफै प्याभिलियन गएका थिए । देशभर गिलक्रिस्टका फ्यानहरूको कमी छैन र यी खेलाडीले धेरै विकेटकिपर ब्याट्सम्यानका लागि रोल मोडलको रूपमा काम गरेका छन्।
वेस्ट इन्डिजका दिग्गज ब्याट्सम्यान क्रिस गेलको मजाकिया र न्यानो स्वभावसँग सबै परिचित छन्। मैदानभित्र ठूला छक्का प्रहार गर्नुका साथै गेलले साथी खेलाडीहरूसँग र कहिलेकाहीँ विपक्षीहरूसँग पनि कुनै न कुनै रूपमा ठट्टा गरेको देखिन्छ। मैदानबाहिर पनि गेल रमाईलो शैलीमा बस्छन् । यही कारणले गर्दा यो खेलाडीलाई मन पराउनेको संख्या निकै बढेको छ ।
KOLKATA, WEST BENGAL – APRIL 03: Chris Gayle of the West Indies celebrate during the ICC World Twenty20 India 2016 final match between England and West Indies at Eden Gardens on April 3, 2016 in Kolkata, India. (Photo by Jan Kruger-IDI/IDI via Getty Images)
न्युजिल्यान्डका कप्तान केन विलियम्सनले आफ्नो उत्कृष्ट ब्याटिङका ​​कारण विश्व क्रिकेटमा ठूलो फ्यान फलोइङ जम्मा गरेका छन् तर उनले सधैं आफ्नो अगाडि टोलीको चासो राखेका छन् । टोलीको हितमा उनले कुनै न कुनै रूपमा योगदान गरेकै हुन्छन । विलियम्सनलाई नेपालमा पनि मन पराइन्छ र आईपीएलमा धेरै समर्थन पाउँछन।
१.एबी डी भिलियर्स
दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व ब्याट्सम्यान एबी डिभिलियर्सलाई विश्वभरका समर्थकले निकै मन पराउँछन् । मैदानभित्र डिभिलियर्सको ब्याटिङ सबैले मन पराउँछन् र उनले रचनात्मक शट खेल्ने शैलीलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् । डिभिलियर्स नेपालमा सबैभन्दा मनपर्ने खेलाडीमध्ये एक हुन्। खेलको गरिमा सधैं कायम राखेका यी खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै दर्शकको मन जितेका छन् ।
अध्यक्ष नेम्वाङ र अल्मुताइरी बीच यस्तो छ पुरानो बिवाद